Tag: shabakada bulshada | Martech Zone
Tag: shabakada bulshada
Su'aalaha Aan La Weydiin Ello
Isniintii, September 29, 2014 Isniintii, September 29, 2014 Douglas Karr
Waan hubaa inuu qof weydiinayo su'aalahan, laakiin waxaan u qaadanayaa inaan ku dhufto marwalba maxaa yeelay ma aanan helin. Waxaan ku biiray Ello goor hore - waxaan u mahadcelinayaa saaxiibkay iyo saaxiibkay teknolojiyadda suuqgeynta, Kevin Mullett. Isla markiiba, shabakadda yar dhexdeeda ayaan dhex mushaaxay oo waxaan helay dad la yaab leh oo aanan weligey hore u arag. Waxaan bilownay wadaagista iyo kuhadalka quite waana wax aad loola yaabo. Qof xitaa wuxuu faallo ka bixiyay in Ello ay leedahay tan cusub
Wednesday, September 24, 2014 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waxay dhacdaa toddobaad kasta. Waxaan e-may ka helaa iibiye ama rajo waxaana wada shaqeynaa taariikh aan ku wada hadalno. Waxaan hubiyaa boggooda oo aan arkaa inay habboon tahay iyo in kale. Xitaa waan la xiriiri karaa iyaga LinkedIn si aan wax badan uga barto iyaga. Taariikhda ayaa la dhigay, kalandarka casuumaadda waa la aqbalay aniguna waan sii socdaa. Toddobaadyo ayaa dhaafa oo digniin ayaa qofka la soo baxaysa.
Noocyada 7 Noocyada Suuqyada Dijital ah
Sabtida, Diisambar 21, 2013 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Dadweynihii ku sugnaa Optify ayaa wadaagay sawirradan wax yar ka dib waxaanan hadda u dhowaanay inaan wadaagno. Tani waa muuqaal qosol leh oo ku saabsan 7 nooc oo suuqgeyaal dijitaal ah. In kasta oo aan jecelahay kaftanka, haddana waxaa jira walaac hoose oo ah in xog-ogaalku runti kor u qaado… suuqleydu waxay u muuqdaan inay sameeyaan wixii ay ku kalsoon yihiin Waxaan daawanay xitaa macaamiisheena ay kusii wadaan ilaha xeeladaha aan shaqeyneyn - si fudud maadaama ay ku qanacsan yihiin
Isniin, Disembar 16, 2013 Isniin, Disembar 16, 2013 Douglas Karr
Dhowr sano ka hor, waxaa la igu xanibay SEO. Kama kaftamayo traffic taraafikada uu Google u dirayo bartayada ayaa haysay habeenkii, qorista, hagaajinta, qorista, hagaajinta, qorista. Waxaan eryanayay algorithm, tartankeyga, waxayna wadday go'aan kasta oo aan ku haysto blogka. Waxaan awooday inaan tuujiyo booqashooyin aad iyo aad u badan, si isdaba-joog ah, oo waxaan uga fiicnaanayay oo uga fiicnaaday shuruudaha guud. Waxay ahayd waalli. Waxay ahayd